Ma u qalantaa iibsashada diyaarad aan duuliye lahayn? | Qalabka bilaashka ah
Qalabka bilaashka ah
Waa maxay Arduino?
Ma u qalantaa iibsashada diyaarad aan duuliye lahayn?
Villamandos | | Drones
ka drones Shaki la'aan waa maantana waa mid ka mid ah qalabka sababaya dareenka ugu badan adduunka. Si kastaba ha noqotee, ka hor intaadan tallaabada qaadin inaad soo iibsato mid ka mid ah aaladahaas, waxaa lagama maarmaan ah in la xalliyo shakiyada qaar, maxaa yeelay xaaladaha badankood waxay leeyihiin qiimayaal aad u sarreeya.
Maanta oo aan sameynayo jimicsi ay in yar oo ka mid ah kuwa jecel tiknoolajiyada ay sameeyaan, waxaan isku dayayaa in aan ugu jawaabo si daacadnimo iyo doodo leh su'aasha cinwaanka maqaalkan siineysa oo aan cid kale ahayn; Ma u qalantaa iibsashada diyaarad aan duuliye lahayn?.
Ugu horreyntii, si loo ogaado haddii ay mudan tahay iyo in kale in la iibsado diyaarad aan duuliye lahayn, waa inaan ogaanno nooca aan duuliyaha lahayn ee aan iibsan doonno Suuqa si aad ah ayuu isbeddelay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaanan horeyba uga heli karnaa qalab qiimo jaban oo aan ka badnayn 50 Yuuroo, laakiin dabcan xulashooyinka iyo howlaha ay diyaaradahaan noo soo bandhigaan aad ayey u kooban yihiin.
Haddii aan dooneyno inaan soo iibsanno diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ah oo qiyaastii ah 50 Yuuroo, waa inaannaan qiimeynin haddii ay mudan tahay iibsashadeeda iyo in kale maxaa yeelay lacag badan kuma qarashgareyno.. Haddii waxa aan dooneyno ay yihiin diyaarad dhab ah, si aan ugu yeerno si uun, waa inaan qiimeynaa waxyaabo badan. Iyaga dhexdooda waa inaad noqotaa isticmaalka aan siin doonno, si aan u adeegsanno iyo gaar ahaan haddii lacagta aan bixin doonno ay tahay mid u qalanta iyadoo lagu saleynayo labada dhinac ee hore.
Daacadnimo Waxaan u maleynayaa in maanta dad yar ay mudan yihiin lacag ay u qalanto diyaarad wanaagsan oo awood leh., iyo in isticmaalka la bixin karo uu aad u yaraaday, marka laga reebo xaalado gaar ah.
Waxaan jeclaan lahaa in diyaaradaha aan duuliye wadin ay duubtaan inta aan ordayo ama i raacayo mar kasta oo aan ka baxo dacwada, laakiin kiiskeyga waxaan u maleynayaa inaysan mudneyn in lacag lagu bixiyo diyaarad aan cidna wadin maxaa yeelay runti ma siinaayo wax faa iido ah taasi oo magdhow ka bixinaysa lacagta qiimaha leh.
Miyaad u maleyneysaa inay u qalanto maanta in lagu iibsado diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ah oo leh qiimaha aaladahaas?.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Drones » Ma u qalantaa iibsashada diyaarad aan duuliye lahayn?
Tsunami, saaxiibkii ugu dambeeyay ee Arduino
Arduino Gemma, bilowga wadashaqeyn mustaqbalka
Ka hel maqaaladii ugu dambeeyay Qalabka.